Saliingooyinka Tallaalka COVID Hadda wuu hooseeyaa: Waxa laga yaabaa inay khatar geliyaan tallaalada
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Saliingooyinka Tallaalka COVID Hadda wuu hooseeyaa: Waxa laga yaabaa inay khatar geliyaan tallaalada
Waxaa lagu qiyaasaa inuu jiro farqi suuqeed caalami ah oo ah 1.2 bilyan aaladaha saliingaha ee badbaadsan ee la iska duro (AD) ee gaarsiinta tallaalka COVID-19. Farqiga sahaydu waxa uu khatar gelinayaa in uu noqdo cidhiidhi halis gelin kara tallaalka wakhtiga ku habboon ee kala badh dalalka Dunida.
Noofambar 11, PATH iyo Sanduuqa Qaramada Midoobay ee Carruurta (UNICEF) waxay qabteen Shirweyne caalami ah oo COVID-19 Warshada Siliinjka Tallaalka oo isu keenay in ka badan laba darsin oo ka mid ah soosaarayaasha saliingaha ee ugu horreeya adduunka iyo ururro dhinacyo badan leh si loo fududeeyo hufnaanta korodhka ee suuqa saliingaha AD si loo caawiyo. xoojinta sahayda tallaallada COVID-19 iyo sidoo kale tallaalka joogtada ah. Wax-soo-saarayaashu waxay xaqiijiyeen caqabadaha saadka sirinjiga caalamiga ah ee muhiimka ah dhammaadka 2021 ilaa badhtamaha 2022, in kasta oo ay laba jibaarmeen wax soo saarkooda iyo dadaalkooda ururrada caalamiga ah si ay u sugaan cirbadaha AD ee dheeraadka ah ee waddamada dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa dhexe ee u baahan.
Korodhka la saadaaliyay ee baahida cirbadaha tallaalka COVID-19, oo lagu qiyaasay in ka badan 4 bilyan laga soo bilaabo dhammaadka 2021 ilaa badhtamaha 2022, waxaa sabab u ah sare u kaca la filayo ee qiyaasta tallaalka COVID-19 ee gaarsiinta wadamada ka imaanaya COVAX, oo ballaaran. deeqaha dawladaha, iyo heshiisyo laba geesood ah. Iyada oo ku saleysan xogta saadka iyo baahida caalamiga ah, qaabaynta PATH waxa ay qiyaaseysaa faraq caalami ah oo ah 1.2 bilyan AD irbado.
Khatarta ku jirta silingaha sida xayiraadaha dhoofinta dalka, dib u dhaca dhoofinta, khadadka wax soo saarka ee cusub ee ku guul daraystay inay helaan u-qalmitaanka Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO), ama daahitaanka dhammaystirka ballaadhinta wax-soo-saarka ee la qorsheeyay waxay ballaarin kartaa farqiga isu-geynta in ka badan 2 bilyan muddadan. Qaadashada kor u qaadista waxay abuuri kartaa cadaadisyo dheeri ah oo suuqa ah.
Tallaalka waxaa si gaar ah loogu sameeyaa irbado AD ku dhawaad ​​70 waddan, 30 waddanna waxay u isticmaalaan tallaalada qaarkood. Tan iyo 1999, WHO, UNICEF, iyo Sanduuqa Dadweynaha ee Qaramada Midoobay ayaa ku taliyay in si gaar ah loo isticmaalo irbadaha AD adduunka oo dhan si loo tallaalo maadaama ay "soo bandhigayaan khatarta ugu yar ee qof-ka-qof ah u gudbinta cudurada dhiigga ka dhasha sida cagaarshow B ama HIV" sababtoo ah irbadaha saliingaha AD lama saari karo ama dib looma isticmaali karo.
Muhiimad ahaan, dhammaan saliingadaha AD waxay bixiyaan qiyaas go'an, taasoo la macno ah in lagu buuxin karo oo keliya qaddarka saxda ah ee hal qiyaas tallaal. Inta badan tallaalada, oo ay ku jiraan kuwa badan oo ah tallaalada carruurnimada ee muhiimka ah, ayaa lagu bixiyaa iyadoo la isticmaalayo mugga 0.5-mL iyo saliingaha AD oo u dhigma. Caqabadaha saadka ee la xidhiidha keenista saliingaha AD waxay ku bateen horumarinta tallaalka, sida helitaankii ballaadhnaa ee dhawaanta ee tallaalka Pfizer ee u baahan 0.3-mL AD saliingaha meel-hooseeya oo khaas ah, kaas oo aan waligeed la soo saarin. Xajmiga cusub ee saliingadaha ayaa ka weecinaya xadhkaha wax soo saarka soo saarista saliingadaha caadiga ah ee AD waxayna ku darayaan caqabadaha is waafajinta qiyaasaha tallaalka oo leh cabbirka saxda ah ee saliingaha barta tallaalka.
Hababka buuxinta faraqa ee suurtogalka ah si loo dardargeliyo gelitaanka, yaraynta dib u dhaca, hagaajinta badbaadada, iyo dhisidda sahayda waara waxaa ka mid ah:
• Kordhinta awoodda wax-soo-saarka iyada oo loo marayo maalgelin istaraatiijiyadeed iyo dhiirigelin si loo dhiso sahay waara loona dhimo dib u dhaca dhoofinta: Deeq-bixiyeyaasha, maalgashadayaasha, iyo dawladuhu waxay soo qaadan karaan agabka loo isticmaalo dhiirigelinta alaab-qeybiyeyaasha tallaalka, oo ay ku jiraan deeqaha, amaahaha dulsaarka-yar ama maya, iyo dammaanadda mugga ka saara xoogaa khatar ah alaab-qeybiyeyaasha. Waxaa si gaar ah muhiim u ah in la balaadhiyo wax soo saarka saliingaha gudaha Afrika iyo Laatiin Ameerika, halkaas oo ay ka jirto saldhig xaddidan iyo waqtiyo raritaan oo dheer oo sahayda dibadda ah.
Dib u qiimee xaaladaha isticmaalka: Ilaa la xalliyo yaraanta saliingaha AD, waddammada awooda inay isticmaalaan noocyada kale ee saliingadaha badbaadada waxay gacan ka geysan karaan ilaalinta sahayda saliingaha AD ee dalalka leh nidaamyo caafimaad oo xaddidan.
• Habee qiyaasta qiyaasta tallaalka: Haddii soo saarayaasha tallaalku ay diyaariyaan tallaalo COVID-19 cusub, xoojiyeyaal, iyo qiyaaso carruurta si ay ula mid noqdaan irbadaha AD ee qiyaasta go'an ee jira, waxay hagaajinaysaa saadka, wax-soo-saarka, iyo ololaha tallaalka.
• Ka fogow xannibaadaha dhoofinta qaranka taasoo sii xaddidaysa saadka: Waddamada leh awoodaha wax soo saarka saliingaha waxay gacan ka geysan karaan wax ka qabashada daldaloolada saadka caalamiga ah si loo gaaro 70 boqolkiiba tallaalka.
PATH waxay sii wadi doontaa la socodka suuqa, iyada oo la filayo in la cusbooneysiiyo xogta 2022 haddii ay jiraan isbeddello la taaban karo. Nashqada PATH hore oo la sii daayay Diseembar 2020 ayaa tilmaamtay khataraha muhiimka ah, oo ay ku jiraan hubin la'aanta baahida iyo sidoo kale waqtiga, saadka dhoofinta, iyo caqabadaha kaydinta.